बिरुवाहरु लागि succinic एसिड: आवेदन
Succinic एसिड स्वाभाविक सानो रकम मा लगभग सबैतिर पाइन्छ। उदाहरणका लागि, यो बिरुवाहरु र पशु जीव मा, अम्बर, खैरो कोइला मा उपलब्ध छ। साथै, यसलाई प्राथमिकताको maleic Anhydride को हाइड्रोजनीकरण द्वारा, औद्योगिक विधिहरू द्वारा प्राप्त छ। Succinic एसिड बिरुवाहरु लागि stimulant छ र आफ्नो स्थिरता बढ्छ।
Succinic एसिड, टमाटर मल लागि बोट आलु छिडकाव। बोट बाली लागि यो प्रयोग गरेर यस्तो आलु रूपमा, फूल बढाउने सक्नुहुन्छ, साथै 35-50 किलो सम्म प्रति सय यसको उपज वृद्धि। छिडकाव बोट नवोदित (40-60 किलो / एल) को समयमा लिइएको छ। यी कार्यहरू सात दिनमा उपचार बीच एक अन्तराल संग तीन पटक दोहोर्याइएको छन्। succinic एसिड तयारी अधिमात्रा खतरनाक छैन हुनत, निर्देशन द्वारा एक निश्चित मात्रा मा प्रयोग गर्नुपर्छ। यो छिडकाव बिरुवाहरु लागि, तर पनि बीउ soaking लागि मात्र होइन लागू हुन्छ।
Succinic एसिड मात्र सकारात्मक प्रतिक्रियाहरू छन्। आखिर, यो लामो केही रसायन बिरुवाहरु को समसामयिक र सही उपचार बिना भन्दा ठूलो प्रभाव दिनको ज्ञात गरिएको छ। संस्कृति जवान छ भने विशेष, दबाइ को कार्य असर गर्छ। Succinic एसिड बिरुवाहरु वा समयमा आफ्नो फूल (वृद्धि) लागू गरिन्छ वा यसको प्रसार सामाग्री ल्याण्डिङ अघि उपचार गरिएको छ। पहिलो मामला मा समाधान एक वा दुई पटक पानी हाले हुनुपर्छ। यी कार्यहरू बिरुवाहरु मदत बिरामी बन्न छैन, र पनि अधिक तीव्र वृद्धि र राम्रो पैदावार निम्त्याउँछ जुन पात मा chlorophyll सामग्री वृद्धि। साथै, यस दबाइ को प्रयोग प्रतिकूल प्रभाव (गर्मी, खडेरी, अतिरिक्त चिस्यान) अन्तर्गत प्रतिरोधी बिरुवा हुनेछ। Succinic एसिड बोट समाधान मा आफ्नो सामग्री अधिक नाइट्रोजनीय पदार्थ को अतिरिक्त संग्रह तिनीहरूलाई रक्षा गर्नेछ।
विकास र उपज मा प्रभाव
यो succinic एसिड तयारी बाली को स्थिरता र उपज सुधार गर्न मद्दत गर्न सक्छ। मूल बाली उपजको 15-20%, वृद्धि Melons - 30% द्वारा। यसबाहेक, Ascorbic को रूप मा पोषक सामग्री वृद्धि एसिड, एमिनो एसिड, शर्करा, जैविक एसिड।
न्यानो पानी मा succinic एसिड प्रयोग भंग गर्न अगाडि (एक सानो रकम तत्संबंधी पर्याप्त छ)। मात्रा गर्न चिसो पानी थपियो। यो समाधान केही दिन भित्र प्रयोग गर्न सकिन्छ। दबाइ कुनै यसको आवेदन मानिसहरूलाई र वातावरण, विशेष सुरक्षा सावधानीहरु गर्न विषाक्त छैन। Presowing बीउ succinic एसिड निम्न कदम समावेश छ। रोपण अघि एसिड वा आधा एक दिनमा बीउ भिजेको वा परिणामस्वरूप समाधान (अवतरण अघि) मा उनलाई अङ्कुराउन। क्रप सिफारिस गरिएको छ बस नवोदित अघि स्प्रे। समयमा फूल प्रशोधन बिरुवाहरु संग succinic एसिड आवश्यक समाधान को एकाग्रता 5-10 पटक लामो छ। प्रशोधन सामान्य भन्दा प्राय एकै समयमा बाहिर छ।
उज्ज्वल दाखको बोट को जंगली अंगूर रोपण र हेरविचार
नासपाती Efimov फैंसी: विवरण वर्ग विशेष हेरविचार
क्यानाडा Sanguinar: खेती र औषधीय गुण
को आइरिस को रोगहरु। Irises: खुला क्षेत्रमा हेरविचार
रास्पबेरी "सुनको शरद ऋतु" विवरण र हेरविचार
Pafiopedilum: घर मा हेरविचार, फोटो। महिला गरेको जूता आर्किड
"Laktomarin" उपचार वा रोग रोक्न सक्छ?
Lorenzo Insigne - "नापोलि" नेताहरू एक
को छडी को आगरणको। को छडी को आगरणको लागि सबै भन्दा राम्रो उपयोगिता के छ?
फिटनेस को मुख्य प्रकार
कसरी प्रत्येक अन्य दुई कम्प्युटर जडान गर्न: शुरुआती लागि मार्गदर्शन
बालिका 11 वर्ष जन्मदिन र नयाँ वर्षको लागि उपहार: मूल विचार
विवरण र सञ्चालन सैंडविच ब्रान्ड मैक्सवेल मेगावाट-1552
यो किन्न कसरी सही नियन्त्रण चयन गर्न र कहाँ
भान्सा को सर्वोत्कृष्ट आकार। एक भान्सा ठाउँ, फोटो योजना लागि सुझाव
कसरी Irpen मा सस्ता अपार्टमेन्ट खरिद गर्न?
बिर्सिएको पुरुष स्लालि नाम र उनीहरूको अर्थ